Hamotika Trano Maherin’ny 200 Eny Amoron-dranomasina Ny ‘Tora-pasika Artifisialy’ Any Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2012 6:46 GMT
Misisika ny hanao ny tetikasa fanamboarana tora-pasika artifisialy izay hanapotika trano maherin'ny 200 amin'ny morontsiraka ny governemanta ao Hong Kong na dia eo aza ny fitsipahana mivaivay avy amin'ireo vondron'ny mpiaro ny tontolo iainana sy ireo mponina voakasika amin'izany. Iray amin'ireo biby ahiana ho lany tamingana tratra amin'izany ny Hippocampus kuda, ao amin'ny fotaky ny tora-pasik'i Lung Mei.
Maro no mihevitra fa hatao hanampiana ny tombontsoan'ny mpandraharaha eo an-toerana ilay tetikasa tora-pasika artifisialy izay hitentina hatramin'ny 280 tapitrisa HKD avy amin'ny volan'ny mpandoa hetra. Nolazainy [zh] tao fa nividy tany lehibe hanaovana hotely spa, trano fialan-tsasatra sy fanintonana mpizahatany maro samihafa, manaraka ny sisin'ny morontsiraka vaovao ny mpandraharaha eo an-toerana.
Trano eny amin'ny morontsiraka maherin'ny 200 no levona
Hippocampus kuda, iray amin'ireo karazam-biby ahiana ho lany tamingana hita tao amin'ny fotaky ny tora-pasik'i Lung Mei. Sary nampiasaina tamin'ny alalana avy amin'ny inmediahk.net.
NIkarakara fihetsiketsehana maro ny firaisankina natsangan'ny vondrona maitso teo an-toerana mba hanakanana ny governemanta amin'ny fanamboarana farany hitadiavana fifanarahana, hanerena ny governemanta haka fanapahan-kevitra hafa, toy ny hoe fananganana toeram-pilomanosana eo akaiky eo toy izay hoe hanimba ny morontsika voajanahary.
Mandahatra karazana aron-kevitra matanjaka [zh] ny fanambaram-panoheran'izy ireo tamin'ny 12 Oktobra, 2012 :
Manana lanjany ara-tontolo iainana bebe kokoa ny morontsiraka 200 metatra voajanahary miaraka amin'ny trano 200 mahery. Ambaran'ny tatitry ny fanadihadiana ara-tontolo iainana nataon'ny governemanta fa telo fotsiny ireo karazana bibin-dranomasina mila harovana. Fa [ireo mponina amin'ny aterineto avy any amin'ny Hong Kong Wildlife Forum] kosa nahita zava-miaina an-dranomasina manan-danja maherin'ny 18 . Tsy ny morontsiraka sy ny mponina ihany no ho simban'ny fanamboarana fa ny tontolo iainan'ny faritra mando eo akaiky eo ihany koa.
Natao hoan'ny Filankevitry ny Distrikan'i Taipo ihany ny fangatahana ny hevi-bahoaka. Tsy misy antony hanaovana fitarainana hoe nangataka ny tora-pasika aritifisialy ireo mponina avy any amin'ny Zaratany Vaovao any Avaratra-Atsinanana. Afaka manatsara ireo tora-pasika roa efa misy any Wu Kai Sha sy any Du Tou Bay ny governemanta, izay samy eo amin'ny distrika iray ihany ary azo aleha tsara amin'ny alalan'ny lamasinina ambanin'ny tany ao an-tanàna.
Mpikamban'ny Filankevitra ao amin'ny distrikan'i Taipo manangan-tanana mikasika ny fanohanana ny tetikasa tora-pasika artifisialy. Sary nampiasaina niaraka tamin'ny alalana avy amin'ny inmediahk.net.
Nihevitra [zh] ny Lung Mei Coastline Education Center, vondrom-bahoaka misahana ny fitahirizana ny fotaky ny tora-pasika, fa mety ho nanitsaka ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana mikasika ny Fahasamihafàna ara-biolojika ilay tetikasa artifisialy. Efa nalahatry ny International Union for Conservation of Nature (Fikambanana Iraisam-pirenena ho fiarovana ny Natiora) fa biby ahiana ho lany tamingana ny Hippocampus kuda, mitovy laharana amin'ny antsantsa trozona izy.
Fanampin'izany, nilaza [zh] ilay Ivotoerana fa tsy mety hilomanosana an-dranomasina ny karazan'ny rano eo akaikin'ny tora-pasik'i Lung Mei:
Toerana fanariana ireo fako avy amin'ny asa fanamboarana ny ranomasina teo akaikin'i Lung Mei taloha. Mirefy eo amin'ny 2 kilometatra tora-droa eo ny faritra ary zara raha hoe 500 metatra miala ilay tora-pasika be fotaka. Na dia tsy misy intsony aza ny asa fanariam-pako amin'izao fotoana, mety ho fitaovana mampidi-doza ihany ireo avy amin'ny asa fananganana avy amin'ny fampiroboroboana ny tanàna vaovaon'i Shatin sy Taipo hatramin'ny taona 1950, toy ny hoe Asbestos sy zavatra hafa misy poizina, toy ny vy mavesatra. Mety ho tandindomin-doza ny fahasalaman'ireo mpilomano.
Inona no tena fahatsaràna marina?
Nanakiana [zh] ny rafitry ny soatoavin'ireo mpanapa-kevitra i Pak, mpilatsaka an-dranomasina sy olon-tsotra mpanangom-baovao ao amin'ny inmediahk.net:
Nilaza tamin'ny mpanao gazety avy amin'ny CNN i Rob Christie avy amin'ny South China Diving Club indray andro izay fa “tsy manana toerana filatsahana an-dranomasina voakilasy eran'izao tontolo izao i Hong Kong, ary ezaka azo atao izany, ary betsaka ny toerana mahafinaritra”.
Nanaporofo ny hatsaran'ny natioran'ny ranomasintsika ny nahitana trondro kintana sy ny Hippocampus kuda – faritra toa lazaina fa maloto nefa manana toerana tsara raha miezaka ny mamantatra izany ianao. Nefa, ireo manam-pahefana sangany izay te hanankarena sy ireo mpanapa-kevitra izay te hanome hafaliana ireo mpanam-bola, tsy mahita akory ny tena harena marina. Tian'izy ireo holevonina amin'ny fanamboarana artifisialy ny tena harena voajanahary ary hakan'izy ireo tombony amin'ny fampiroboroboana ny fanànan-tany.
Araka ny nolazain'ireo vondrona maitso, tsy mifanolana loatra ny fampiroboroboana sy ny fiarovana. Raha miaro an'i Lung Mei sy ny faritra mando Dong Kwok eo akaikiny ny governemanta dia tsy azo sandaina vola ny soataovina aterany ho an'ny fanabezana, ny tontolo iainana, ary koa ny fizahantany satria mihabetsaka hatrany ny zava-manan'aina an-dranomasina ahiana ho lany tamingana ary dia ho sarobidy hatrany hatrany ny valan-java-boahary.
Maninona isika no mihevitra “hatsarana” amin'ny endrika tora-pasika artifisialy? maninona isika no maminavina sehatra ara-pizahantany toy ny hoe misotro divay mena anatina efitra fitaratra eo akaikin'ny tora-pasika iray? maninona no tsy afaka manakaiky kokoa ny natiora ary miaina ny fahagagan'ny tontolo iray izay feno zava-manan'aina maro?
Mpanohitra manodidina ny 1,000 no nivondrona teo ivelan'ny foiben'ny governemanta tamin'ny Alahady 4 Novambra, nangataka ny famerenena ny fanadihadiana mikasika ny lanja ara-tontolo iainan'ny fotaky ny tora-pasika ao Lung Mei. Nilaza ny vondrona maitso ao an-toerana fa hitaky ny famerenana ny fandinihana araka ny lalàna izy ireo raha misisika amin'ity tetikasa fanamboarana ity ny governemanta.
Mpanohitra anjatony no nangataka ny governemanta hampiato ny tetikasa fanamboarana tora-pasika artifisialy any Lung Mei. Sary nalain'i Mary Chan, nampiasaina niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana.
Vondrona maitso naneho sarin'ireo mponina amin'ny morontsiraka tamin'ny fihetsiketsehana natao ny 4 Novambra? Sary nalain'i Mary Chan, nampiasaina niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana.